Yintoni eNtsha kwi-AutoCAD 2010 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Okubuyisa i-AutoCAD 2010
Okubuyisa i-AutoCAD 2010
Leli gama uHeidi unikele kulo mhlaziyi-AutoCAD, unyaka omnye emva kwethu uya kuthetha nge-AutoCAD 2009. Ukuza kumalumekazi obone into entsha yonyaka ngamnye iminyaka eli-17, kunokuba kufanelekile ukujonga. Iqela labo lelona ebesinalo ngo-Oktobha, Ndiyatshitshiswa kukuba imifanekiso eqingqiweyo emele le nguqulo ye-2010 ebizwa ngokuba yi "Gator", ifana ne "Izihlanganisi ezizalisayo" ... iyandivakala.
Ukudluliswa kwemvume, kunokwenzeka ukudlulisa ilayisensi ngokusebenzisa uqhagamshelo lwewebhu, ukusuka komnye umatshini ukuya komnye, ukuze ukwazi ukusebenzisa le unayo kwiofisi yakho, kumatshini wakho wasekhaya, nakwilaptop yakho xa useluhambeni. Kubonakala ngathi yindlela elungileyo yokuphuma kum, ngelixa bekwazi ukusombulula ukusetyenziswa kweelayisensi ezidadayo eofisini, ukuze bazisebenzise koomatshini abohlukeneyo (hayi ngaxeshanye). Isebenza ngeseva yelayisensi ye-AutoDesk apho iphepha-mvume kufuneka lithunyelwe kwelinye ilizwe, likhutshwe kumatshini kwaye liyafumaneka ukuba lingeniswe kwakhona kumatshini omnye okanye komnye.
Ukuprinta kunye neenkonzo ze-intanethi
Thumela kwi PDF, Thumela kwi-pdf ukwandisa, iimpawu zobuncwane zingathunyelwa, ukulawula okungakumbi oko sifuna ukuthumela.
Biza ikopi ye-PDF, le ngenye yemizamo engcono, kwaye leyo yayikuphezulu kwoluhlu olufunayo; lithetha ukuba ifayile yefayili ingabhekiselwa kuyo njenge-dwg, dgn okanye i-dwf, Kuyaqondwa ukuba kuya kugcina i-georeferenti kwaye iyakwazi ukukhishwa kwiijometri eziqulethwe kule pdf.
AutoDesk Funa, Unako ukufikelela kunye nokukhonza iifayile ngokufumana uxhulumaniso lwewebhu.
Inkxaso ye-STL, ngoku i-3D into ingashicilelwa phantsi kwenkxaso yokuba ezinye iinkonzo ze-intanethi zifuna, kwakhona ngeTransmit.
Umzobo weparameter, igama linikwe uhlobo oluthile lokuqwalasela olunokunikezelwa kwiijometri, umzekelo, ukuba i-trapezoid iyisiqingatha sokuphakama kwayo; Ngale ndlela ingasetyenziswa xa kusebenza icandelo lomdonga ogcinayo, kwaye ngokukrazula ukuphakama kuphela sizakudala iJometri.
Iibhloko ezinamandla, uqikelelo kwinyani yento abamele yona. Ithetha ukuba inokunika iipropathi kwiibhloko, ezinje ngokuthi, lo ngumnyango okwisicwangciso, uya kuhlala une-10 cm ukutyeba zombini igqabi kunye nesakhelo sokubala, kodwa ububanzi Ububanzi bomngxunya bunokwahluka, kunye nobubanzi bodonga. Ngale ndlela sinokusebenzisa ibhloko efanayo kwiintlobo ezahlukeneyo zomnyango ngokusekwe kwitafile yempawu.
Achurado, banikezela amandla angcono, okokuba unqamaniso olungabonakaliyo lunokuhlelwa kwaye lwandiswe kumda.
Umsebenzi we-3D kunye nokujonga
Imodeli ye-digitalUkumodareyitha umphezulu kunokucocwa, utshilo uHeidi, ke ukuzingela umfanekiso ngaphezulu kwawo kungabonakala kuyinyani. Ngale nto ndicinga ukuba basebenze nzima ukuphucula isantya sokuqhubekeka, kungenjalo iya kudla ubuncwane obuninzi kunokuba ingasenabo. Nangona kuyilo lweenxalenye ezinokugqitywa koomatshini, umbala wazo ucabalele, ujongeka ulungile kwaye awufuni memori ininzi.
Juggling 3D, ngoku umbono wento unokusetyenziswa ngemilinganiselo emithathu ngaphandle kokuchaza i-axis ejikelezayo. Oku ukunika ukusebenza ngakumbi kwifayile ye- Ulawulo lwe-Wii eziba ziwayo, oku kuthetha ukuba ngevili lesigxina elixinzeziweyo lingadalwa liphenduke njengoko lenziwa ngeGoogle Earth.
Ukukhethwa kwezinto eziphantsi, ngoku i-3D into efana neqela, njengekhampu inokukhethwa ubuso bayo; kunye nalapho uchaphazela izinto kwi Corel Dweba, nangona ziqokelelwe, umsebenzi ufika njengelucwecwe kodwa ndiyathemba ukuba kunye nekhendi ye ctrl banokukhethwa kwaye iipropati zabo zitshintshile ngaphandle kokuzixhaphaza.
Jikela i-Viewport, inkulu!, ingajikelezwa ngokugcina ukujongwa komzobo okanye ukuguqula kwakhona.
Ukujonga kuqala kumzekelo, njengoko ubonayo ukusuka kwindlela ebekwe ngayo, ngoku ungayenza imodeli.
Iphepha libeka, ulawulo olukhulu lweemakhishithi kunye neetafile eziza kupapashwa.
Ibha yesicelo, kwikhoneni elingasentla elingaphezulu kwesokunxele liya kwandisa inketho yokukhusela okanye ukukhubaza iibharari zethuluzi, ukukholisa abo abangaba ngesimo se-Ofisi ye-Office 2007 nangona kungalunganga ukusetyenziswa kobuqhetseba bongameli.
iRibhoni, I la mara wayethanda, kodwa wabuza ukuguquguquka ngakumbi kokufumana izixhobo, ngoko ngoku ukulungiswa kwayo kufuneka kulawulwe ngakumbi.
Ibha yokufikelela ngokukhawulezaKubonakala ngathi kuyafana noko kunxulunyaniswa nabantu nokusetyenziswa kweWindows abasete iipateni ezamkelweyo ngokubanzi. Siza kubona ukuba ngaba kulula nje ngokuba "thumela kwipaneli".
Ucaphulo, ngoku, xa ubiza i-reference, i-Ribbon / isert inelawulo oluyimfuneko ukuchaza iipropati zefayili elayishiwe, makube dwg, dgn, dwf, raster okanye pdf.
Ukukhangela kunye nokubhala
Multileader , Ngoku kunokwenzeka ukuphawula iimpawu ukusuka kwelinye ukuya kwiiqela eziliqela, oko kukuthi, ngesicatshulwa esisodwa iintolo zokubonisa, ezidibeneyo.
Umbhalo wesicatshulwa, ngoku ilawulwa ngakumbi, uyifudukela apho ufuna ukuyifaka ngaphandle kokubuya okukhulu.
Khangela uphinde ubeke endaweni, ngoku kunokwenzeka ukugqamisa iitekisi ezibangelwa uphando, mhlawumbi etafileni, kwaye unako ukusondeza lonke ukhetho.
Umxholo, ngoku i-text multiple ingasetyenziswa ngumbono we-8 ngaphandle kokutshabalalisa ubomi.
Upelo, ngoku kubandakanya ukuhlengahlengisa kwaye ubuyele kwakhona xa wenza iphutha, Haleluya!
IiNew Features Features Workshop, ukwazi iincwadi ezintsha zeli phephancwadi ... kuya kufuneka sifeze nalo myalelo othukuthelayo unyaka wonke.
CUIxI-Txus iyakwazi ukuba kuthetha ntoni oko, kuyacaca ukuba yinto entsha ephunyezwe ukuza kuthi ga ngoku. Siza kubona ukuba kukho impendulo evela kumhlobo wethu.
Ukulinganisa, Amaqela umlinganiso woMmandla, umgama, irediyasi, i-engile kunye nevolumu, ucinga ukuba inokwenziwa ngendlela ebonakalayo. Nangona sonke besilindele ukuba kubekiwe kwaye hayi kwilayini yomyalelo; ukuba kunjalo, iipropathi zoluhlu lwemigca ziya kufana netafile elula ukuyithumela kwi-Excel ... kuya kuhlala kubonakala.
ihlanjululweNgoku kungenzeka ukuba kukhuculwe izinto linear ngobude elingunothi (hayi amanqaku), kwakhona izicatshulwa eziqulathe akukho abalinganiswa ... ngaphezu okulungileyo kuba ukucocwa topological wayephambene ngenxa basurillas ezinjalo.
Action Macros, unokuqwalasela iinkqubo ezihambelanayo, mhlawumbi zifana noko kwi-ArcGIS ebizwa ngokuba "yi-geoprocessing", kufuneka uzame.
Ubunini bobuninzi bomda bunyuselwa ubuncinane kwi-4 GB (kuxhomekeke kwindlela yoqwalaselo lwenkqubo), ukubonelela ngokuguquguquka ... ???? Akunakuqonda ukuba kuya kuba yintoni.
Uqwalaselo lokuqala, kukudibanisa ukhetho lomsebenzisi kwindawo yokusebenza ngokuzenzekelayo. Ndiyaqonda ukuba xa umsebenzisi engena banokukhetha imeko-bume enokhetho oluthile lokubonisa, iiyunithi, i-snaps, i-ucs, njl.
Ukhokelo oluchaziweyoEli luphawu olukhulu, into yomgama inokutshintshwa kwicala layo. Okwangoku, ipropathi ifunyenwe njengoko yayakhiwe, kodwa akunakwenzeka ukuba uyiguqule ngaphandle kokuba izotywe umva okanye yahlelwa ngokutsha. Iluncedo kakhulu kwiindlela zezitrato kunye nezitishi zepoligoni.
Ubomi kwi-spline, ngoku kuyenzeka ukuguqula ispline kwi-pline. Masikhumbule ukuba i-spline ivelise ukungqubana kokubalwa kwendawo okanye ukuyijoyina kwi-spline; oh, kwaye ukuba umntu omsulwa wenza imigca yokusebenzisa le ndlela ... wayeza kufa.
Umbala webala, Ngoku kunokwenzeka ukutshintsha umbala wezohlu ngaphandle kokuba uvule iphaneli, ngokuthe ngqo kwimenyu ehlayo.
Kubonakala ngathi olu tshintsho aluzukubaluleka xa kuthelekiswa noko kwakucacisiwe yi-AutoCAD 2009, kuphela kukuphuculwa kunoko sele kukhona, kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba uninzi lwezi zinto zintsha zibalulekile. Ndimele ndivume ukuba kuyakufuneka kuvavanywe uhlobo, ukuqinisekisa ukuba into esiyiqondileyo kule post injalo. Okwangoku, i Umsindo u qalile kwinto esiya kukwazi ngayo yonke loo nyaka njenge-AutoCAD Gator 2010.
Apha u nga khuphela isikhokelo sezinto ezizenzekelayo ze-AutoCAD 2010.
Apha unokubona iividiyo imiboniso yezinto ezintsha zokusebenza.
Kwakhona kwi-Youtube kukho ezinye iividiyo ze-AutoCAD 2010 LT.
AutoDesk Dgn Dwg Umhlaba ka-Google
Ulawulo lolwazi, indlela yokuSebenza
Lázaro Santofimio uthi:
Mva ntambama, ndinomdla ekufundeni indlela yokusebenzisa esi sixhobo esinamandla, mbulela.
i-leoncio iphikisana uthi:
ndiyathanda ukuba iinqununu zendlela yokuphucula le sicelo kwi-gciological engineering grcias
URoberts Basaldúa Sulca uthi:
2010 AutoCAD zingasebenza ngempumelelo enkulu-moya Geological Engineering kwi komhlaba ngaphakathi indawo Minera Veta, ukuyila kwiGeological Imephu kokukokwam zingaphuhliswa ngendlela eyiyo kule mveliso AUTODESK.
Ozithobileyo, Injineli yeJoloji uRoberts Basaldúa ...